Facebook မှာ profile Name မြန်မာစာမမှန်လို့ ကူညီပါအုံး - MYSTERY ZILLION
Facebook မှာ profile Name မြန်မာစာမမှန်လို့ ကူညီပါအုံး
February 2017 in Windows 7
facebook မှာအခြားစာတွေ အကုန်မှန်တယ် Profile Name မှာ မမှန်ဘူးဖြစ်နေတယ်
ကူညီပေးကြပါအုံးခင်ဗျ အဖွဲ့ဝင်အသစ်ပါ :-/
web ? android ? iOS ? windows ? ဘယ်နေရာမှ​ာ ဘယ်လို မပေါ်တာလဲ ? windows store က facebook ဆိုရင်တော့ နေရာတိုင်းမှာ ဇော်ဂျီ ပေါ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။